Maxaa ka jira in DFS ay ka shakisay Xildhibaanadii codka siin laha musharax Qoor Qoor - Awdinle Online
Maxaa ka jira in DFS ay ka shakisay Xildhibaanadii codka siin laha musharax Qoor Qoor
January 18, 2020 (Awdinle Online) –Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa hantida Qaranka si qaldan ugu isticmaaleysa doorashada Galmudug,waxaana wararka qaar ay sheegayaan in Xildhibaanada cusub ee Galmudug la dejiyay Hotelo qaali ah.
Xildhibaanadana ay Dowladda Federaalka ku bixineyso qarajka ayaa lagu wargeliyay iney doortaan musharaxa ay wadato ah oo Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor.
Tiro aan badneyn oo Xildhibaano ah ayay Dowladda Federaalka Soomaaliya kaga shakisay iney qiyaanaan oo aysan codka siin musharaxa Villa Somalia ay wadato,kuwaas oo cadaadis xooggan la saarayo.
Goobaha Xildhibaanada shaqsiga ay u codeynayaan ku qoraan magaciisa ayaa lagu dhejiyay Kaamirada qarsoon,taas oo looga ogol leeyahay in looga hortago qiyaano ay sameeyaan Xildhibaanada Madaxtooyada lacagaha ka qaata.
Doorashada Galmudug ayaa meel xasaasi ah mareysa,waxaana dadka siyaasadda u dhuun duleela ay sheegayaan in Dowladda Federaalka ay ku guuleysaneyso doorashada Galmudug.
Guddoonka Baarlamaanka cusub ee Galmudug ayaa shalay oo jimco ahayd lagu doortay magaalada Dhuusamareeb,kuwaas oo ay ku soo baxeen shaqsiyaad ku xiran Villa Soomaaliya.
Previous articleBam gacmed lagu weeraray Guri ku yaalla Muqdisho oo dad dhaawacyo ka soo garay
Next articleDagaal ka dhacay qeybo ka mid ah degmada Afgooye ee gobolka Sh/Hoose.